Kenya iyo Tanzaniya oo ku muransan dib u dhac ku yimid hayaanka duurjoogta - BBC News Somali
Kenya iyo Tanzaniya oo ku muransan dib u dhac ku yimid hayaanka duurjoogta
Image caption In ka badan hal milyan oo ah lo'Gisida ayaa sanad waliba u kala talaaba Tanzaniya iyo Kenya
Dowladda Tanzaniya ayaa beenisay war ka soo baxay qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya goobaha lagu xanaaneeyo duurjoogta dowladda Kenya oo ku saabsan in Tanzaaniya ay billaawday dab, si ay u hakiyaan hayaanka duurjoogta oo muhiim u ah dalxiiska labada dal.
Kenyanka ayaa waxay sheegeen in dabkani uu ahaa mid lagu kala ceyrinayay duurjoogta oo goob isugu soo uruurtay si ay uga hayaanto beerta Serengeti National Park oo Tanzaniya ku taalla ayna ugu ruqaansato goobta duurjoogta lagu xanaaneeyo ee lagu magacaabo Maasai Mara National Reserve oo Kenya ku taalla.
Dowladda Tanzaniya ayaa sheegtay in dabku uu yahay dhaqan caadi ah oo loogu talagalay in cowska lagu kobciyo oo u goobtaasi cows badan ka baxo dabka ka dib.
Xukuumadda Tanzaniya ayaa sidoo kale sheegtay in roobabka mudada dheer da'ayay laga yaabo in ay dib u dhigtay in ay duurjoogta ay ku sii sugnaato Seerada Serengeti.
Tanzaniya iyo Kenya ayaa waxaa caadi ah in uu dhex maro dagaal dhanka ganacsiga ah oo mararka qaar isu badala dagaal dublamaasiyadeed, waxaa sidasi sheegay wariyaha BBC, Sammy Awami.
Hayaanka duurjoogta ayaa lagu waday in ay bilaabato toddobaadkii aanu soo dhaafnay taasi oo imika dhalisay shakiga ah xilliga lagu soo beegay dabkani in uu yahay mid lagu minjaxaabinayo hayaanka duurjoogta, ayuu intaa ku daray.
" Tanzaaniya ayaa billaabaysa dabkan waxaa laga yaabaa in ay uga gol leeyihiin ayna rajaynayaan in dalxiisayaasha ay Tanzaniya sii joogaan ," Waxaa sidaasi u sheegay wariyaha BBC Anne Ngugi ,Fankras Karema oo ah mid ka mid ah dadka dalxiisayaasha caawiya.
Waxa u intaa ku daray in dib u dhaca ku yimidduurjoogta la filayay in ay dhanka Tanzaniya ka so gudubto ay tahay mid niyad jabinaysa dalxiisayaasha islamarkana ganacsiga saamaynaysa.
Dorina Makaya,oo ah afhayeenka wasaarada khayraadka dabiiciga ah iyo dalxiiska ayaa beenisay eedeynta arrintan ku saabsan.
"Sababta ay suuragalka tahay in dib u dhaca uu ku keenay hayaanka duurjoogta ayaa ah in wali ay biyo haystaan" ayay tiri.
Duurjoogta ayaa waxa ay mar walba u hayaamaan oo ay u guuraan halka ay daaq iyo biyo ka heli karaan, waxa ayna u kala tallaabaan dalalka Tanzaniya iyo Kenya.
Hayaanka duurjoogta ka badan 1 milyan ayaa sanad waliba isaga kala gudbi xudduuda u dhaxeeysa Kenya iyo Tanzaniya ayaa waxa uu soo jiitaa dareenka guud ahaan caalamka.
Daawshadaduurjoogta ka gudubta wabiga Mara River, oo ku yaalla xuduuda labada dal ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay a mid tahay la yaabka dunida.
Dalalka Kenya iyo Tanzaaniya ayaa waxa ay dalxiisayaasha u daawasha taga hayaankan waxa ka soo gala dhaqaalo dhan malaayiin doolar.